Bvunza Semalt: Ndeipi Inonyanya Kugona Kurega Kurejera Spam
Mushure mekuisa Google Analytics, kana iwe ukacherechedza kuti kufamba kwako kwawedzerwa pasina, chiratidzo chokuti webhusaiti yako iri kugamuchira maonero asina kunaka uye iwe unofanira kutora matanho ekudzibvisa iwe nekukurumidza.
Unonzi Abgarian, Mutungamiriri Mukuru weVatengi vekubudirira Semalt , anonyevera kuti nhamo, hapana nzira yakagadzirirwa yekubvisa spam kubva kuGoogle Analytics nekusingaperi. Zvisinei, iwe unogona kuderedzera njodzi kuburikidza nekushandisa nzira dzakasiyana-siyana - smok v8 tips.
Spam bots uye kushandiswa kwavo
Chimwe chezvikonzero chikuru chatinowana spam kureva ndeye spam bots. Vanyori vanozvigadzira nenzira dzakawanda uye vanoedza kuita vanhu vakawanda mukunyengedza mawebsite avo. Vanotumira kubatanidza kubhokisi rako rekunyora uye vanoita sekuti vanogona kuunza zvakawanda zvemigwagwa. Kana iwe ukanyora pazvibatanidza, uchaona kuti nzvimbo yako iri kuwana zvakawanda zvekutakura, asi iyo motokari haina chokuita neichoicho. Vanokuvadza vanoshandisa spam bots kukunyengerai.
Mitemo yeReferenda yeSpam
Tsvina dze spam dzinoshandisa nzira dzakasiyana-siyana dzekusika kutumira spam: kuburikidza nemweya yekufambisa uye kushambadzira. Google Analytics haigoni kuongorora kana kutonga kuti chii chiri kutumira kukwira uye chii chiri kutumira mweya. Iyo mweya inotarisa inowanikwa apo Google Analytics yako inoshungurudzwa nefake kana kuti isingazivikanwi motokari, apo kuendesa kwechikwata kunoitika apo nzvimbo yako inogamuchira nhamba yakawanda yemaonero kubva kune zvisingazivikanwi. Iwe unoda kubvisa mabhoti nekuti unoda kuderedza mutoro pavhavha yako uye mawebsite ako. Zvakakoshawo kuti uwane data yakarurama kubva kuGoogle Analytics yehutano hwewebsite yako..
Zvaisazova zvisina kunaka kutaura kuti pane dzakawanda spam domains asi dzakakurumbira ndidzo darodar.com, ilovevitaly.co, semalt.com, uye buttons-for-website.com. Zvinokosha kuti ugare kure nemamwe mawebhusayithi uye mamwe masayiti akafanana sezvaanogona kukuvadza nzvimbo yako uye anogona kuparadza Google AdSense.
Kubviswa kweZve Behaved Bots uye Spiders
Unogona kubvisa tsvina dzakanaka uye bots kubva kune deta yako nekugadzirisa zvirongwa zvako. Kana iwe usingavadziviriri kana kuvabvisa nokukurumidza, pane mikana yokuti nzvimbo yako ichakuvara. Mazhinji emabhodhi uye zvitsotsi zvinotarisa nzvimbo-yakanaka, asi zvirikukuvadza deta yako yepaIndaneti neIndaneti. Google Analytics inopa maitiro akasiyana-siyana, mazano, mazano, uye mazano kuti uvabvise pawebsite yako. Iwe unogona kuenda kune chikamu admin kuti uone zvishandiso zvitsva uye gadzirisa zvirongwa zvako maererano.
Nzira yekusunungura sei mafungiro emweya?
Mushure mokuongorora mamwe maitiro, ndakaona kuti zviri nyore kudzivirira mweya yekufambisa kuburikidza nokuisa uye kuita mafaira ako. Iva nechokwadi chekuti unoshandisa zvinyorwa zvakasiyana-siyana kuti uwedzere kudzivirira kwako paIndaneti. Iwe unofanirwawo kugadzirisa mazita ekugadzirisa mazita mazita. Nokuda kweizvi, iwe unofanirwa kuisa ID yako yekutsvaga kana nhamba. Rega ndiuye pano kuti ndikuudze kuti mabhoti akangwara kwazvo; havangabvumi chero mukana wekuenda kana nzvimbo yako kana Google Analytics isingakuvadzi.
Bvisa Rafa Referral Spam
Kana wapedza kugadzirisa zvirongwa zvepamusoro, danho rinotevera nderekushandisa yakakodzera mazita ekugadzirisa mafaira achachengetedza nzvimbo yako neGoogle Analytics zvakachengeteka kubva pakutumira spam. Iwe haufaniri kukanganwa kuti vanocheka vanoshanyira nzvimbo yako ikozvino uye nekuedza kukuvadza data yako. Ndicho chikonzero nei uchifanira kuvabvisa kubva pawebsite yako uye Analytics pakutanga kwako.